Google: Siyaxolisa, ulwimi lwaseKannada ALUYONA 'imbi eIndiya'
Ikhaya » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zokuhamba zaseIndiya » Google: Siyaxolisa, ulwimi lwaseKannada ALUYONA 'imbi eIndiya'
Google: Siyaxolisa, ulwimi lwaseKannada alukho 'olubi eIndiya'
Ukuchwetheza “olona lwimi lubi eIndiya” kwiinjini yokukhangela kuGoogle kubuyise "isiKannada," ulwimi oluthethwa ngabantu abangaphezulu kwezigidi ezingama-40, ubukhulu becala kumazantsi mpuma eIndiya ilizwe laseKarnataka.
UGoogle unyanzelekile ukuba akhuphe uxolo kwilizwe laseIndiya laseKarnataka
UGoogle umisele iziphumo zokukhangela ezingathandekiyo
Amagosa aseIndiya abiza uGoogle ukuba "ayilunganga"
Kutshanje, inkampani yezobuchwephesha yamazwe aseMelika uGoogle yahlaselwa emva kokuba kufunyaniswe ukuba ukuchwetheza “olona lwimi lubi eIndiya” kwinjini yokukhangela kubuyise “isiKannada,” ulwimi oluthethwa ngabantu abangaphezulu kwezigidi ezingama-40, ubukhulu becala kumazantsi-ntshona eIndiya ilizwe laseKarnataka.
Ingxilimbela yezobuchwephesha yase-US yanyanzelwa ukuba ikhuphe uxolo emva kwesikhalo esibuhlungu esivela kumagosa aseburhulumenteni aseKarnataka.
Ukuchongwa kabuhlungu kungekudala kwabamba iliso lamagosa e-Bangalore, ikomkhulu likarhulumente, abachitha ixesha elincinci begxeka Uphando ngokujongela phantsi ulwimi lwabo lwaseburhulumenteni.
Ulwimi lwesiKannada lunembali yalo, lwakha lwenzeka kwiminyaka engama-2,500 XNUMX eyadlulayo! Ibe likratshi lamaKannadigas kuyo yonke le minyaka mibini inesiqingatha, ”utshilo uArvind Limbavali, umphathiswa wehlathi laseKarnataka.
Uye wafuna uxolo kuGoogle "ASAP" ngokuthuka urhulumente kunye nolwimi, kwaye egrogrisa nangezomthetho ngokuchasene nesigebenga seSilicon Valley.
U-PC Mohan, olilungu lePalamente elimele iBangalore (ekwabizwa ngokuba yi-Bengaluru) Central, naye wayecaphukile ngokufanayo, esazi ukuba isiKannada "sinelifa elityebileyo" kwaye lolona lwimi ludala emhlabeni.
"IKannada yayinabaphengululi abaphambili ababhala ii-epics ngaphambi kokuba uGeoffrey Chaucer azalwe ngenkulungwane ye-14," utshilo umthetho.
Omnye umntu kwezopolitiko kurhulumente, u-HD Kumaraswamy, owayengumphathiswa oyintloko wase Karnataka, wathi "impazamo" kaGoogle ayamkelekanga.
“Akukho lulwimi lubi. Zonke iilwimi intle, ”uphawule watsho.
Ukuphendula kwimpindezelo yomsindo, uGoogle walungisa iziphumo zokukhangela ezingathandekiyo kwaye wakhupha uxolo. Inkampani ivumile ukuba inqaku lokukhangela ngamanye amaxesha liyadida kwaye "indlela umxholo ochazwa ngayo kwi-intanethi unokuvelisa iziphumo ezimangazayo kwimibuzo ethile."
"Ngokwendalo, ezi azibonisi izimvo zikaGoogle, kwaye siyaxolisa ngokungaqondi kunye nokwenzakalisa naziphi na iimvakalelo," inkampani igxininise, yongeza ukuba yayiqhubeka nokusebenza ekuphuculeni ii-algorithms zayo.
I-UNWTO neGrisi ukuseka iziko lophando lokhenketho lwaselwandle lokuqala
iiyure 23 eyadlulayo
Amazwe ali-9 kwali-10 ase-Afrika amiselwe ukuphosa iinjongo zokugonya ezingxamisekileyo ze-COVID-19
iiyure 24 eyadlulayo
I-Air Canada yandisa ixesha elibekiweyo lomgaqo-nkqubo wokubuyiselwa kwemali we-COVID-19
Iindaba zokuhamba e-UK
Abahambi bakhetha ukubhukisha iiholide ngokuthe ngqo kunye nababoneleli phakathi kokungaqiniseki
iiyure 19 eyadlulayo
Iindaba zeBarbados zokuhamba
IBarbados ikhupha ingxelo malunga nokuvavanywa kwabagibeli beMillennium yoVavanyo lwe-COVID-19
Iindaba zaseSeychelles zokuhamba
Uvavanyo lwe-PCR eSeychelles ayisiyongxaki emva kwako konke
Usuku lweLwandle lweHlabathi 2021 - Ukugcina ulwandle lwaseSeychelles